Isingeniso kwiVangeli likaLuka
Incwadi kaLuka yabhalwa ukuba inike ingxelo echanekileyo yenkcazelo yomdla kaYesu Kristu . ULuka wachaza injongo yakhe yokubhala kwiindinyana zokuqala ezine zesahluko esisodwa. Akunjalo kuphela nje ngembali-mlando kodwa kunye nogqirha wezokwelapha, uLuka waziqwalasela ngokubanzi iinkcukacha, kubandakanywa imihla kunye neemeko ezenzeka kulo lonke ubomi bukaKristu. Umxholo ogxininiswe kwiVangeli likaLuka ngumntu kaYesu Kristu kunye nokuphelela kwakhe njengomntu.
UYesu wayengumntu ofezekileyo owanikela umbingelelo othethelelekileyo wesono, ngoko, ukubonelela uMsindisi opheleleyo kubantu.
Umbhali weVangeli likaLuka
ULuka ungumbhali wale Vangeli. UngumGrike kunye nomlobi kuphela ongumKristu weTestamente eNtsha . Ulwimi lukaLuka lubonisa ukuba uyindoda efundiswayo. Sifunda kwiyabaseKolose 4:14 ukuba uyigqirha. Kule ncwadi uLuka ubhekisela kwizihlandlo ezininzi kwizifo nokuxilonga. Ukuba ngumGrike kwaye ugqirha wayeza kuchaza indlela yakhe yesayensi kunye nokuhleleka kwincwadi, enika ingqwalasela enkulu kwiinkcukacha zakhe.
ULuka wayengumhlobo othembekileyo kunye nohambo lukaPawulos. Wabhala incwadi yeZenzo njengendlela eya kwiVangeli likaLuka. Abanye bahlambalaza iVangeli likaLuka kuba wayengengomnye wabafundi abangu-12. Nangona kunjalo, uLuka wayefikelela kwiirekhodi zembali. Wayephanda ngononophelo waza wathintana nabafundi nabanye abantu ababezibonela ebomini bukaKristu.
IVangeli likaLuka yabhalelwa kuTheofilo, okuthetha ukuba "uthanda uThixo." Izazi-mlando aziqinisekanga ukuba ngubani lo Theophilus (okuthethwe ngaye kuLuka 1: 3), nangona kunjalo, wayengumRoma onomdla omkhulu kwinkolo yobuKristu esanda kuyenza. ULuka usenokuba wayebhalela ngokubanzi abo babemthanda uThixo.
Incwadi ibhalwa kwiintlanga kunye nabo bonke abantu kuyo yonke indawo.
Indawo yeVangeli kaLuka
ULuka wabhala iVangeli eRoma okanye mhlawumbi eKhesareya. Izicwangciso kule ncwadi ziquka iBetlehema , iYerusalem, iJudiya nelaseGalili.
Izihloko kwiVangeli likaLuka
Inhloko ebalulekileyo encwadini kaLuka ngumntu ophelele kaYesu Kristu . UMsindisi wangena kwimbali yabantu njengomntu ofezekileyo. Yena ngokwakhe wanikela ngomnikelo ogqibeleleyo wesono, ngoko, ukubonelela uMsindisi opheleleyo uluntu.
ULuka uqaphele ukunika ingxelo echanekileyo kunye nechanileyo yophando lwakhe ukuze abafundi bakwazi ukuthembela ngokuqinisekileyo ukuba uYesu unguThixo. ULuka uphinde uchaze umdla omkhulu kaYesu kubantu nasebudlelwaneni . Wayenemfesane kwabampofu, abagulayo, abakhathazayo naboni. Wayemthanda kwaye wamkela wonke umntu. UThixo wethu waba yinyama ukuba azibonele nathi, kwaye asibonise uthando lwakhe lokwenene. Uthando olugqibeleleyo kuphela lunokuwanelisa isidingo sethu esona sithintelo.
IVangeli likaLuka inika ngokukhethekileyo umthandazo, imimangaliso kunye neengelosi. Inomdla ukuphawula, abafazi banikwa indawo ebalulekileyo kwiincwadi zikaLuka.
Abalingani abalulekileyo kwiVangeli likaLuka
UYesu , uZekariya , uElizabhete, uYohane umBhaptizi , uMariya , abafundi, uHerode Omkhulu , uPilato noMary Magdalena .
Luka 9: 23-25
Wandula ke wathi kubo bonke, Ukuba umntu ethanda ukuza emva kwam, makazikhanyele, athabathe isiphambano sakhe imihla ngemihla, ndilandele, ngokuba umntu ofuna ukuwugcina umphefumlo wakhe uya kulahlekelwa nguye; Ulungele ntoni umntu ukuba azuze ihlabathi lonke, kodwa alahlekelwe okanye alahlekelwe ngokwakhe? (NIV)
Luka 19: 9-10
UYesu wathi kuye, Namhlanje usindiso lufikile kule ndlu, ngokuba lo mntu unyana ka- Abraham, ngokuba uNyana woMntu weza ukufuna nokulondoloza into elahlekileyo. (NIV)
Inkcazo yeVangeli likaLuka:
Ukuzalwa nokulungiselela kukaYesu uMsindisi - Luka 1: 1-4: 13
Umyalezo kunye noNkonzo kaYesu uMsindisi- Luka 4: 14-21: 38
Ukufa novuko lukaYesu uMsindisi - Luka 22: 1-24: 53
Iincwadi zeTestamente Endala zeBhayibhile (Index)
Iincwadi zeTestamente eNtsha zeBhayibhile (Index)
Umzekeliso weMvu elahlekileyo
4 Izinto IBhayibhile Ethetha Ngayo Ngenkxalabo
UYesu Kristu-iNkosi noMsindisi wehlabathi
Yintoni IBhayibhile Eyithetha Ngayo Ilungelo Lokuthwala Izixhobo?
Korneliyu uba ngumKristu
UMariya Magdalene - Umlandeli kaYesu
UZekariya - uYise umBhaptizi kaYise
Ngubani OyiNtombikazi kaMariya, unina kaYesu?
Ziziphi iindidi eziHlangayo?
IiDVD zamaPoliti eziPhambili kuma-1990
Ukwenza izigqibo zoLuleko kwiinqununu
Ukubulisa abantu ngesiNgesi
Yenza Ingqondo Amaphulo Akunamathele
Xa Ingafuni Ukuthenga I-Pontiac Esetyenzisiweyo
Ulungelelwano lweMigangatho yegolide luhambelana njani nobuGcisa?
Izidumi ezi-5 eziye zadlula eMhlophe kwi-Golden Age yaseHollywood
Amaqiniso Nge-Kilimanjaro, iNtaba ephakamileyo kunazo zonke e-Afrika